စာမေးပွဲနှင့် အလုပ်ကိစ္စများအတွက် ဒီကနေ့စပြီး ခွင့်ယူပါတယ်နော်။
ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ပြန်လာပါ့မယ်နော်။
မီးဖိုဆောင်လေးကို ၀ိုင်းတော်သားများနဲ့အတူ ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးကြပါနော်။
ဒီကြားထဲ more..ကိုနှိပ်မရရင် သည်းခံပါနော်။ မအားလို့ ဖြေးဖြေးပြင်ပါရစေ။
စိမ်း... October 6, 2009 at 8:59 PM
အင် ဟိုတလောကမှ နေမကောင်းလို့ခွင့်ယူတာမှမကြာသေးဘူး...
ခုလည်း ယူပြန်ပြီ... :(
မြန်မြန်ပြန်လာနော်... ဗိုက်ဆာနေပြီ... :P
အင်.... ပဲ့တင်ထပ်နေတာလား..စိမ်း :P
ကျောပိုးအိတ် October 7, 2009 at 9:12 PM
စာမေးပွဲကို အများကြီးဖြေနိုင်ပါစေ။ အလုပ်လဲ အဆင်ပြေပါစေနော်။
Anonymous October 13, 2009 at 2:17 AM
ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျမမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ဘာချက်ရမလဲ ခေါင်းခြောက်နေတာ။ လုလု ဆိုဒ်ကို လာလာကြည့်ပြီး ဒီနေ့ဘာချက်မယ် ဆိုပြီး အိုင်ဒီယာ ယူ ယူသွားတယ်နော်။ အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ ပါစေ။
Shinlay October 17, 2009 at 1:57 AM
Lu, Good luck for your exam and
take it easy for your work.
Take care yourself and I wish you all the best...
Anonymous October 24, 2009 at 1:00 AM